राष्ट्र बैंकको पछिल्लो नीतिले शेयर बजारमा कस्तो प्रभाव पर्ला ? « Arthabazar.com
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो नीतिले शेयर बजारमा कस्तो प्रभाव पर्ला ?
प्रकाशित मिति : १३ जेष्ठ २०७८, बिहीबार ०८:१३
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई शेयर लगानीमा कडाइ गर्ने भएपछि लगानीकर्ता भने बजार प्रभावित हुनेमा चिन्तित बनेका छन् । राष्ट्र बैंकले मंगलवार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई लघुवित्त कम्पनीको शेयर खरीदमा रोक र दीर्घकालीन लगानीमा जोड दिन निर्देशन दिएको हो ।
तेस्रो त्रैमासिक मौद्रिक नीतिको समीक्षामा गरेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने क्रममा राष्ट्र बैंकले उक्त निर्देशन दिएको हो । अबको नयाँ व्यवस्थामा बैंकहरूले ०७८ जेठ १० गतेसम्म खरिद गरेको लघुवित्तको शेयर आगामी पुस मसान्तभित्र बिक्री गरिसक्नुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने प्रयोजनका लागिबाहेक लघुवित्त कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्न रोक लगाएको हो ।
हाल बजारमा लगानी गरिरहेका बैंकहरूले धेरैजसो लगानी १४ महिनाभित्र बिक्री गरी नाफा बुक गर्ने हुँदा यो वर्ष र आगामी वर्ष ती संस्थाहरूको नाफामा उल्लेख्य प्रगति हुनेसमेत पौडेलको अपेक्षा छ । अर्का लगानीकर्ता तुलसीराम ढकाल बैंकहरूलाई शेयर लगानीमा गरेको कडाइले बजारलाई खासै प्रभाव नपार्ने बताउँछन् । बैंकहरूको प्राथमिक काम शेयर खरिद बिक्री गर्ने नभएकाले नयाँ व्यवस्थाले बजारमा खासै प्रभाव नपर्ने विश्लेषण ढकालको छ । ‘शेयर किन्ने म्युचुअल फण्डहरूले हो न कि बैंकले । यति थोरै सप्लाइ रहेको बजारमा अरू क्षेत्रको लगानीले माग बढाउन सहयोग मिल्छ’, उनले भने ।आजको आर्थिक अभियान दैनिकबाट